မနက်ဖြန်ည BELFAST ရှိ VENGABOYS နှင့် STEPS တို့၏ UK ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါ - သတင်း
မနက်ဖြန်ည Belfast ရှိ Vengaboys နှင့် Steps တို့၏ UK ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါ
လူတိုင်းကသင့်ရဲ့ 90s halter လည်ပင်းသီးနှံထိပ်များနှင့်ကောင်းဘွိုင် ဦး ထုပ်အဆင်သင့်မှာအဆင်သင့်ရပြီ, သင်အကြိုက်ဆုံးဒတ်ခ်ျ Eurodance အုပ်စု Vengaboys နိုဝင်ဘာ 12 ရက်တနင်္ဂနွေ, ဘဲလ်ဖတ်အတွက် SSE နယ်ပယ်သို့လာနေကြသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း Vengaboys သည်နိုဝင်ဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာလတစ်လျှောက်လုံး U.K. ခရီးစဉ်တွင်အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ် ၉၀ အုပ်စုများကိုထောက်ခံနေပြီး Venga ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ပထမဆုံးမှတ်တိုင်မှာဘဲလ်ဖတ်ဖြစ်သည်။
⚓️ Sailorboy ရော်ဘင်သည် h ည့်လမ်းညွှန်အတွက်သူ၏ ဦး ထုပ်များကို sort ခွဲထုတ်⚓️ #PartyOnTheDanceFloor ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူး ests ည့်သည်များတွင် #Special ကိုအလေးအနက်ထားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ @officialsteps xo #Vengaboys နှင့်အတူဤခရီးစဉ်အတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသလား။ #IETour ?? #UKTour ?? ။ ထိုအ ... ရုံတစျနေ့ကပို! #countdown ။ ။ ။ ။ #PartyOnTheDanceFloor #Steps #Sailorboy #Sailorhat #sailor #rocktheboat #StepsTour #StepsSpecialGuest #NonStopWorldTour #love #loveislove #vengaboy #vengagirl # theweekoninstagram # 90 အပြောင် # တံဆိပ် # ပြောင်ပြောင်တံဆိပ် # တံဆိပ် # ပြောင်တံ၊
ဥရောပ၏နံပါတ်တစ်ပါတီအက်ဥပဒေဖြင့်မျှဝေသောပို့စ် 6:12 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 11, 2017 ရက်တွင် (@vengaboys)
၄ င်းတို့ကိုပလက်တီနမ်ပေါင်းစုံရောင်းသည့်နာမည်ကြီးအဆိုတော်များဖြစ်သော 'We Like to Party', 'Boom Boom Boom !!' နှင့် 'ငါတို့က Ibiza ကိုသွားမယ်' ဟုလူသိများသောအဖွဲ့ကို ၁၉၉၆ တွင်ပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအပြီးတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Vengaboys သည် (အဖွဲ့ ၀ င်အသစ် Donny Latupeirissa နှင့် Roy den Burger ကို Cowboy နေရာတွင်အစားထိုးခဲ့သည်) နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့ကြပြီးမကြာသေးမီကယူကေနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများသို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ် 'Up and down - The Party Album!' နှင့်အတူ 2018 ခုနှစ်တွင်နှစ်ဆယ်အသက်အရွယ်လှည့်နှင့်အတူ, ဒီဥရောပရဲ့နံပါတ်တစ်ပါတီလုပ်ရပ်နှင့်သင်၏ cheesy 90 ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်စံပြအချိန်ပဲ!